Shirar ay qabteen OYSU Seatle iyo Shir Stokhlom lagu sagootiyay Dhalinta Scandenevianka | Ogaden News Agency (ONA)	الأخبار بالعربية
Shirar ay qabteen OYSU Seatle iyo Shir Stokhlom lagu sagootiyay Dhalinta Scandenevianka
Waxaa shalay galab Shir Soo dhaweyn & sagoontin isugu jira ka dhacay Magaalada stochkholm ee Wadankan Swden.
shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen Ururka OYSU Sweden ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweynayay Dhalinyarada oysu ee ka kala timid wadamada Natherland, Denmark, Norway & dhamaan gobolada Wadanka sweden.
Shirka ayaa ujeedooyinkiiisa ugu muhiimsan ay ahaayeen sidii looga qeyb gali lahaa shirka OYSU qaarada Europa ee ka furmi doona wadanka Finland 16 -ka bishan july.
dhalinta ayaa dood dheer & fikiradooda kala duwan ka dhiibanayay sida ugu wanaagsan ee looga mira dhalin lahaa shirkan iyado shirkan la sheegay in sanadkan uu wax yaabo badan kaga duwan yahay kuwii ka horeeyay. finland ayaa lagu tilmaamaa inay tahay meelaha sida weyn ay dhalinta uga helaan marka ay noqoto marti galinta shirarka dhalinta.
dhalinyaro aad u tira badan ayaa doonta ka raacday subaxa saaka ah wadanka Sweden iyagoo in ka badan 12 saacadood bada kusii dhex jiri doona.
hadaba guud ahaan OYSU world wide-ka gaar ahan OYSU sweden waxay shirka Finland ee Qaarada Yurub u rajeynayaan inuu noqdo mid si guul ah kusoo gaba gabooba ujeedooyinki iyo hadafkii laga lahaana laga gaaro.
Shir aad u balaadhan oo ay qabteen Ururka Dhalinta OYSU Seattle:
Shirkan ayaa waxaa kasoo qeybgalay culumaa’ dudiinka magalada Seatle iyo xubnaha Ururka OYSU iyo dhamaan jaaliyada Seatle Washington. Jabarti Ismacil ayaa shirka furay waxa uuna kusoo dhaweeyay Naciima Maxamed Ismacil oo marti sharafta shirka aheyd.
Naciima waxa ay halkaas kusoo bandhigtay Macluumaad laxidhiidha Qaxootiga Ogadeniya ee kusugan xeryaha Qaxootiga kenya oo ay iyadu kasoo diyaarisay xeryaha qaxotiga maclumaad aad muhiim u ah oo ay si tafatiran ula wadagtay shirka dhalinta OYSU seatle.
Shirka OYSU seatle guul ayuu kusoo dhamaaday waxaana halkaas ka hadlay masuliyiinta Jaaliyada Seatle oo guubaabo iyo dhiiragalin xoogan kasoo jeediyay.
Short URL: http://www.ogadennet.com/?p=13984
Both comments and pings are currently closed.	1 Comment for “Shirar ay qabteen OYSU Seatle iyo Shir Stokhlom lagu sagootiyay Dhalinta Scandenevianka”
xusen maxamed	July 15, 2012 - 7:51 am	mansha allaah walle oysu maalin iyo haben halganbay wadaan insha allah wad gadhaysan hadafkina ee marna hakadalina guul iyo gobanimo
Last 24 hours: 8,120 Last 7 days: 56,318 Last 30 days: 243,490 Online now: 20 Traffic Counter